Chicken Scream, သင်၏အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော Android | Androidsis
Chicken Scream, သင်၏အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော Android ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သောကြက်၏ဂိမ်း
ဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုနည်းနည်းကွဲပြားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုပို့ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါကမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗွီဒီယို post တစ်ခုယူလာပေမဲ့ android ဂိမ်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အစိမ်းရောင် Android operating system တွင်ကစားလေ့ရှိသည့်ဂိမ်းများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ဒီဂိမ်း၏ကွာခြားချက်သည်၎င်း၏ကစားနိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်မတူညီသောလူမှုကွန်ယက်များနှင့် Android လောကရှိအထူးပြုမီဒီယာများတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖောင်းပွမှုရှိသည်။
ဒီဂိမ်းကိုခေါ်တယ် ကြက်သား အော်ဟစ် နှင့်အကောင်းဆုံးလူသိများသည် အသံနှင့်ထိန်းချုပ်သောကြက်၏ဂိမ်း။ ရိုးရှင်းသောဂန္ထဝင်ပလက်ဖောင်းပုံစံတွင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်မရှိဘဲကစားခြင်းနှင့်ဖော်ရွေသောကြက်ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသံကိုသာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။
ကြက်သားအော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို Android အတွက်တရားဝင် application store Google ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ငါဒီဂိမ်းထဲကရနိုင်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်အထူးအရာတစုံတခုရှိပါလျှင်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အခြား Android platform များနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်ငါ၏အရသာသည်လူသိရှင်ကြားအလွန်များပြီးထိပ်ဆုံးတွင်နေရာယူသည်။
ငါ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းလူသိရှင်ကြားမှဤအရာကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုများစွာတားဆီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Chicken Scream သည် Android အတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည် လူသိရှင်ကြားကစားရန်မသင့်တော်သော်လည်းကျွန်ုပ်ပြောရမည်မှာ၎င်းသည်ကြက်မကြီးအားကျွန်ုပ်တို့၏အသံကိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။
Chicken Scream ၏ကြီးမားသောခြားနားချက်သည်၎င်း၏ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဂိမ်းကစားခြင်းထက်များစွာပိုသည်။ ၎င်းသည် Android အတွက်ဂန္တ ၀ င်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ.
ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်များနှင့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြက်မကြီးအားအလကားအခမဲ့ရွေ့လျားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာသားအတိုင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် ဟမ်, မနာသီချင်းဆိုသို့မဟုတ်ကြက်မှတီးတိုး, ဤနည်းအတွက်ကြက်လမ်းလျှောက်သည့်အခါအလွန်ဆင်တူလမ်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းသွားသဖြင့်တိုးလိမ့်မယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောအတားအဆီးကျော်ခုန်သို့မဟုတ်သွားကြဖို့ လမ်းပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့ ကျနော်တို့ကြက်ကိုထိန်းချုပ်ထားသောနှင့်အတူသေံမြှင့်အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်စကားပြောနေပါကကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို၍ ကျယ်သောအသံနှင့်သီဆိုမည်ဆိုပါကကြက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနာခံပြီးသက်ဆိုင်ရာအတားအဆီး၊ ချောက်ကမ်းပါးစသည်တို့ကိုခုန်ကျော်သွားလိမ့်မည်။
ဒီတော့ရိုးရှင်းပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပျော်စရာသည်ဤအတော်လေးအသစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည် မကြာသေးမီရက်များကမတူညီသောလူမှုကွန်ယက်များ၌ paste လုပ်သော Android ဂိမ်း.
Chicken Scream ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ download ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Chicken Scream, သင်၏အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော Android ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သောကြက်၏ဂိမ်း
Spotify က "Behind The Lyrics" အပိုင်းကို၎င်း၏ Android app ထဲသို့ထည့်သည်
Google က Android app အတွက်ညဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်